Love Messages for Girlfriend အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
1.20.54 for Android
ဒေါင်းလုပ် APK（13.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Love Messages for Girlfriend - Share Love Quotes
Girlfriend for Love Messages သည် Android အတွက်လူမှုရေးဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ချစ်မြတ်နိုးသူများနှင့်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာကိုးကားချက်များနှင့်စာတိုများကိုစုစည်းထားသည့် Android အတွက်လူမှုရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာပြသမှုများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်ရင်ခုန်စရာမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်အက်ပ်များရှိသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမက်ဆေ့ခ်ျအမြောက်အမြားပါသောလူမှုရေးအက်ပ်တစ်ခုကိုရှာခြင်း၊ သင်၏ Android စက်တွင် Love Messages for Girlfriend ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုးကားချက်များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ သင့်ဇနီး၊ ရည်းစား၊ အမေသို့မဟုတ်သင်ဂရုစိုက်သူမည်သူမဆို။
Android အတွက်အခမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုးကားချက်များအက်ပလီကေးရှင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောဒီဇိုင်းနှင့် interface သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့်သင်ပထမဆုံးရှုပ်ထွေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖြတ်သန်းစရာမလိုဘဲသင်၏ပထမဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပေးပို့သည်နှင့်တပြိုင်နက်စိတ်ကူးတစ်ခုလုံးကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ် ချောချောမွေ့မွေ့ကာတွန်းမှုများ, ရရှိနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ SMS နှင့် r ၏ကြီးမားသောစုဆောင်းမှု omantic kissing မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများနှင့်အလိုလိုသိသောမျက်နှာပြင်သည်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာ quotes app ကို Android အတွက်အကောင်းဆုံးရင်ခုန်စရာ SMS အက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏ # 1 ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းသင့်သနည်း romantic SMS collection app
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျအချို့ပေးပို့ရန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်အဘယ်ကြောင့် Girlfriend အတွက် Love Messages ကိုတပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကောင်းပြီ၊ ဤမေးခွန်းသည်မျှတသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာ SMS အက်ပလီကေးရှင်းကိုအပြီးသတ်ဖော်ပြရန်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
One ။ လက်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာများကောက်ယူစုဆောင်းမှုတွင်သင်၌ထားရှိသောအရာအားလုံးပါဝင်ပြီးသင်၏လက်ရှိခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးထူးခြားသောသတင်းတစ်ခုကိုသင်အမြဲရှာနိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သောအမျိုးအစားများမှာနမ်းခြင်း၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၊ ပရောပရည်စာများ၊ အချစ်အခြေအနေ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်းစကားများ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ SMS စာကြည့်တိုက်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများကိုသင်ဝေမျှရန်လတ်ဆတ်သောထူးခြားသောမက်ဆေ့ခ်ျများအမြဲရှိစေရန်အသစ်သောအကိုးအကားများဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံနေသည်။
သုံး။ ရရှိနိုင်သည့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာများကသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသတင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်နောက်ခံများကိုထည့်နိုင်သည်၊ ဖန်စီထားသောစာလုံးများနှင့်သင်္ကေတများကိုသုံးနိုင်သည်၊ သင်၏စာသားသို့စတိုင်ထည့်နိုင်သည်၊ အခြား filter များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Girlfriend အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏မက်ဆေ့ခ်ျများကြည့်ပါ -
အရည်အသွေးမြင့်သောဂရပ်ဖစ်များ ကာတွန်းများနှင့်အတူကာတွန်းပုံများနှင့်အတူ•ချစ်ခြင်းမေတ္တာများနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအမြောက်အမြားစုဆောင်းထားခြင်း။ •သင်၏ရင်ခုန်စရာအနမ်းစာတမ်းကိုနောက်ခံထည့်သွင်းပါ။ •သင်၏စာသားသို့စတိုင်ထည့်ပါ။ > Girlfriend for Girlfriend for Love Messages ကို Android ဖုန်း၊ တက်ဘလက်များတွင်အခမဲ့ download လုပ်၍ bug များ၊ မေးခွန်းများ၊ အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်အခြားအကြံပြုချက်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
ဘာအသစ်လဲ Love Messages for Girlfriend - Share Love Quotes 1.20.54
Bug fix. Added more Background Images, Fonts.
I NEED YOU ❤️ Love Messages 💌
100+ LOVE Text Messages To Send To Your Girlfriend
Love Messages for Girlfriend - Share Love Quotes 1.20.52
Love Messages for Girlfriend - Share Love Quotes 1.20.50
Love Messages for Girlfriend - Share Love Quotes 1.20.48